Ootitshala Imfundo eQala
Iingcebiso ezili-10 zokusinda kwiHlabathi
Iinyanga zasebusika zinokuzaliswa ngamanzi abandayo, iintsuku, abafundi abangapheliyo, kunye neentsholongwane ezinzima. Ukuba uhlala kwiNxweme eMpuma ke wena (kunye nabafundi bakho) uhlala kwiintsuku zekhephu nje ngokuba inceda ukuphula loo mihla ende ebusika. Ngaphandle kwe-co-up, abantwana abangapheliyo, kunye neentsholongwane ongenakubonakala ngathi ziphuma eklasini lakho, uqaphela ukuba abafundi bakho banaloo nyaka-nyaka kwaye baxhalabisayo izifundo zenu zangaphambili.
Ukubetha ii-pesky Germs eklasini
Ifoto ngeNkxaso yeCidstock / Getty Izithombe
Ngokomphando 1 kwabafundi aba-3 baya kubanda ngamanye amaxesha ngonyaka. Akumangalisi ukuba unayo yonke loo ntsholongwane eklasini lakho! Ngoko, unokwenza ntoni ngawo? Okuninzi! Eli nqaku liya kukunika iingcebiso malunga nokuba ngabazali bangenza ntoni ekhaya (ngoko abantwana babo abayi kuzisa iigciwane kwiklasi) kunye nento ongayenza eklasini.
Ukugcina impilo kwiClassi
Ifoto enyanisekileyo yeeNene / Getty Images
Ukusebenzisa ucoceko oluhle kwigumbi lakho lokufundela kuya kunceda ukugcina abafundi bakho behlambulukile kwaye banempilo. Nazi izinto ezimbalwa ozenzayo eklasini lakho ukunceda abafundi baqonde malunga nokugcina ucoceko olulungileyo, kunye nendlela yokugcina ezo ntsholongwane!
Yilungele Usuku olugulayo olungalindelekanga
Yakha "i-tub sub-tub" kule mihla yokugula engalindelekanga. I-Photo Courtesyf yeJamie Grill / Getty Izithombe
Ngaba ulungele usuku olungalindelekanga lokugula? Iinyanga zasebusika lixesha lonyaka apho uza kubona amaqanda amaninzi, kwaye uninzi ufumana ezimbalwa. Kufuneka ulungele oku! Nazi izicwangciso ezimbalwa zokukunceda ukuba uzilungiselele ukwenzela ukuba xa uphumla ekhaya, awuyi kuzaliswa ngxhala malunga nokuba uthini wakho othabathayo owenzayo eklasini lakho. Kaninzi "
Ukulwa noTitshala Ukutshaya Ngaphambi kokuba kufike ixesha elide
Ifoto ekhokelwa yiRyerson Clark / Getty Izithombe
Emva kwekhefu leKrisimesi abaninzi ootitshala baziva ukuba umsindo we-middle-year burnout. Akunakuphika ukuba ukufundisa ngumsebenzi oxinzeleleyo, ngoko ukukwazi ukujongana noxinzelelo lwakho kubaluleke kakhulu ukuze uqhubeke nomnyaka wesikolo. Nazi iindlela ezili-10 zokulwa nokutshiswa komfundisi.
Thatha i-Break Brain Break
Ifoto yeSap Art Art Getty Izithombe
Kubanda ngaphandle oku kuthetha ixesha elincinane lokuthabatha abafundi ngaphandle. Kubalulekile ukunika abafundi bakho "usuku lokuchola ubuchopho" kwimizuzu emithandathu yemizuzu yonke yesikolo. Nazi iziphakamiso ezimbalwa malunga nendlela yokwenza oko. Kaninzi "
Yenza iFundo yoNwabo
Yenza abafundi bahlolisise ubuxhakaxhaka kunye nokunyaniseka ngokuqala ukwenza izibikezelo. Ifoto enesiXeko se-Hybrid Izithombe ze-Getty Images
Iinyanga zasebusika lixesha eligqibeleleyo lokwenza ukufunda kube mnandi kwakhona! Yenza uvavanyo olumnandi, imisebenzi yokufunda ngezandla, kwaye uqhube ngeendlela zokuzonwabisa ezithe tye! Nazi ezinye iimbono ezimbalwa malunga nendlela yokwenza ukuzonwabisa kumnandi eklasini lakho. Kaninzi "
Ifoto yokukhupha i-Lorend Gelner / Getty Izithombe
Ukucamngca kwengqondo kunokuphucula impilo yakho kwaye kukuve ukhululekile! Iinyanga ezinobusika, ezinobusika zingabangela umntu ukuba azive ehlelwe kwiindawo zokulahla! Sebenzisa le mihla yokucoca ngokucwangcisa imihla ngemihla ukwenzela ukuba uzive ungakhathazeki, kwaye ujonge ngakumbi wena kunye nabafundi bakho. Kaninzi "
Ukusebenzisa iYoga kwiKlasi
Ifoto efanelekileyo ngoKristupoher Futcher / Getty Izithombe
Amaklasi kuwo wonke uhlanga ayavuna iindleko zeklasi yogaga. Iinyanga zasebusika lixesha eligqibeleleyo lokuzisa le misebenzi emangalisayo kwikharityhulam yakho yemihla ngemihla. Awuyi kubona kuphela ukuba abafundi bakho bazive bebhetele, kodwa nawe uya kuba! Nazi iimbono ezimbalwa malunga nendlela onokuqalisa ngayo namhlanje. Kaninzi "
Ukubhiyozela iSuku le-100 lweSikolo
Ifoto ngokufanelekileyo ngoJanelle Cox
Ngethuba phakathi kukaJanuwari-Februwari kufuneka uhlasele umhla we-100 wempawu zesikolo. Bhiyozela ngalo mhla kunye nabafundi bakho ngokuzibandakanya kwimisebenzi embalwa yokuzonwabisa ebandakanya inombolo 100. Nazi iimbono ezimbalwa. Kaninzi "
Yidla kwiZenzo zoNgcaciso zeNcwadi
Ifoto enesidima se-Yellowdog / Getty Izithombe
Ngaba uye wakha weva ngelizwi elithi "Ndifuna ukukhawuleza ngomlilo ngencwadi enhle?" Ubusika lixesha eligqibeleleyo lokuba abafundi bakho bafunde! Nazi izinto ezingama-20 ezinxulumene nencwadi ozakuzama. Kaninzi "
Iindlela ezili-10 zokwenza ukuNandi ukufunda
Amanqanaba okuFunda okuSebenzisiweyo kwiKlasi lakho
Iincwadi ezi-10 zeNtloko zeBantwana ngoBawo
I-Pros and Cons Cons of Distribution of Instruction for Students Homeschooled